Izindaba - Ukuthuthukiswa kohlobo olusha lwe-drape yokuhlinzwa
I-drape entsha yokuhlinza ihlanganiswe nezinto ezahlukahlukene inezinto eziphakeme zokuvimbela, ukuze uketshezi lomzimba noma uketshezi ngesikhathi sokusebenza kugobhozela esikhwameni sokuqoqa eceleni kwesethi ebekiwe, futhi kungahlali endaweni yokuhlinzwa ukuthinte ukusebenza, futhi ngeke inamathele. Ukushiya emzimbeni wesiguli noma ku-drape ehlinzekwayo kuzodala ukungcola noma ukutheleleka, futhi ngeke kufafaze uketshezi olwenziwe ngesikhathi sokuhlinzwa komzimba wabasebenzi bezokwelapha. Ngakho-ke, kungavimba ngempumelelo ukutheleleka kwesiguli futhi kuvikele abasebenzi bezokwelapha. Ukuphepha kuvumela ukuthi umsebenzi wenziwe ngokushelelayo nangendlela efanelekile. Eminyakeni yamuva nje, amakhithi okuhlinza ngokukhethekile emisebenzini ethile athuthukisiwe kusuka ku-drape eyodwa yokuhlinzwa. Lokhu kuthuthukisa ukusebenza okujwayelekile kokuhlinzwa, futhi kunciphise nokunciphisa ubungozi bokuhlinzwa kanye namathuba okutheleleka.
Ikhithi yokuhlinza kufanele ifakwe ithawula elikhethekile lomgodi wokuhlinzwa. Ngokusebenza okuhlukile, ikhithi yokuhlinzeka nayo ifakwe izinto ezihambisanayo ezihambisanayo noma izinsimbi ezidingekayo ukuqedela konke ukusebenza, okufana nezingubo zokuhlinza, amathawula wokuhlinzwa, amacansi etafula, omatilasi, amapuleti ayisikwele, amashidi e-gauze, izindwani, izinkomishi eziwuketshezi, amagilavu ​​okuhlola injoloba , i-hemostatic forceps, izipanji zokubulala amagciwane, amabhola kakotini, amapuleti okubulala amagciwane, njll. zisongwe ngendwangu ye-SMMMS futhi zivalwe esikhwameni sezokwelapha se-dialysis, futhi zadlula ku-ethylene oxide Ngemuva kokuvalwa inzalo, kugcinwa endaweni yokugcina izimpahla futhi kungasetshenziswa nganoma yisiphi isikhathi .
Lolu hlobo lwamakhithi okuhlinza luhlukaniswa kaningi: amakiti okuhlinza jikelele; ukuhlinzwa kobuchopho, amakhithi wokuhlinzwa we-ENT; intamo, ukuhlinzwa kwe-thoracic, kits ukuhlinzwa kwesifuba; ukuhlinzwa kwezinso, amakhithi okuhlinzwa esiswini; i-gynecology, ama-kore okuhlinza i-anorectal; amakiti okuhlinzwa ngokuhlanganyela; ukungenelela kits Steel nokunye. Lawa makhithi okuhlinza angavulwa egumbini lokuhlinza ukuze ahlangabezane nazo zonke izidingo zenqubo yonke yokuhlinza, ngaphandle kwesidingo sokufanisa okwesikhashana izinto ezisetshenziswayo ezihlinzekwayo, ngakho-ke ingaqala ukusebenza okukhethekile ngesikhathi esifanele nangempumelelo, futhi ingavimba ngempumelelo futhi vikela ukufinyelela ngesikhathi sokusebenza. Igazi lesiguli, uketshezi, umuthi owuketshezi, njll., Kuvikela ngokuphepha ukuphepha kwabo bobabili odokotela neziguli, futhi kunciphise nethuba lokutheleleka.